အဖွဲ့များကို ထိရောက်စွာ စီမံခန့်ခွဲရန် လိုအပ်သော ကျွမ်းကျင်မှု ၇ချက် | Mycanvas
အဖွဲ့များကို ထိရောက်စွာ စီမံခန့်ခွဲရန် လိုအပ်သော ကျွမ်းကျင်မှု ၇ချက်
1. ရှင်းလင်းထိရောက်သော ဆက်သွယ်ရေး
manager တစ်ဦးအနေဖြင့် company မှသတ်မှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်ရည်မှန်းချက်များအတိုင်းထိရောက်စွာ၊ တသမတ်တည်း အလုပ်များကို ပြီးမြောက်အောင် ကူညီပေးရန်ဖြစ်သည်။
Company ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်အညီ သင့်အဖွဲ့၏ လိုအပ်မည့် တိကျသောအလုပ်နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို အသေးစိတ်ဖော်ပြရှင်းလင်းတင်ပြနိုင်စွမ်းရှိရမည်။
သင်သည် သင့်အဖွဲ့အတွင်း ရှုပ်ထွေးမှုများကို ဖယ်ရှားနိုင်သူဖြစ်ပြီး လူတိုင်းနှင့်လိုက်လျောညီထွေရှိပြီးတူညီသောပန်းတိုင်ဆီသို့ လျှောက်လှမ်းနေကြောင်းကို ထိရောက်စွာပြောဆိုဆက်သွယ်နိုင်သူ တစ်ဦးဖြစ်ရမည်။
Emotional Intelligence ဆိုသည်မှာစီမံခန့်ခွဲနိုင်သည့်အပြင် လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ စိတ်ခံစားမှုများကို နားလည်နိုင်သည့်စွမ်းရည်ရှိရမည်။
စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာ ဉာဏ်ရည်မြင့်မားမှုတို့သည်မန်နေဂျာကောင်းများနှင့် ခေါင်းဆောင်ကောင်းများ၏ အမှတ်အသားဖြစ်သည်။မိမိကိုယ်မိမိ သိရှိနားလည်မှု၊ စာနာမှုနှင့် အခြားလူမှုရေးဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုများရှိသူတစ်ဦးသည် အခြားသူများကို လှုံ့ဆော်မှုနှင့် သြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်သူတစ်ဦးဖြစ်သည်။
ဒါတွေကတော့ manager ကောင်းများ ပြသရန်အရေးကြီးသော အရည်သွေးများဖြစ်ကြသည်။
Company ဝန်ထမ်းများလုပ်ဆောင်သည့် နေ့စဉ်အလုပ်များအပြင် budgetနှင့် projectများကြီးကြပ်ရန်သင့်၌တာဝန်ရှိသည်။
4. Delegate လုပ်နိုင်စွမ်း
သင့်အဖွဲ့၏အဖွဲ့ဝင်များကို micromanage ဖြင့်ခန့်ခွဲရန် သင့်အတွက် ကောင်းမွန်မှု ရှိနိုင်သည်။ သို့သော်လည်း ထိုသို့ လုပ်ဆောင်ခြင်းက တိုးတက်မှုကို ထိခိုက်နိုင်သည်။
Manager ကောင်းတယောက်အနေနှင့် မည်သူနှင့် မည်သညိ့ အလုပ်တို့သည် အသင့်တော်ဆုံးဆိုတာကိုလည်းသိရှိနားလည်ပြီး အလုပ်တာဝန်များအားမည်သို့ တာဝန်လွှဲအပ်ရမည်ကိုကောင်းစွာသိရှိနားလည်ရမည်။
ပွင့်လင်းမှုနှင့်ဉာဏ်ရည်၊ ဉာဏ်သွေးတို့သည် စည်းချက်ညီစွာယှဉ်တွဲ၍ လုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်။
companyအဖွဲ့ဝင်များ၏မေးခွန်းများ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိသည့်အခါ ၎င်းတို့သိလိုသောရှင်းလင်းချက်များကို သင့်ထံသို့ကိုမေးမြန်းချင်ရန်အရေးကြီးပါသည်။
ဒါမှသာ ပြဿနာ သို့မဟုတ် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို အချိန်မနှောင်းမှီ ကြိုတင်ပြုပြင်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုကို စနစ်တကျ မည်မျှကောင်းမွန်စွာပြင်ဆင်ထားသော်လည်း managerများသည် ပြဿနာများနှင့်ရင်ဆိုင်ကျရသည့်အခါ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရသည့် နောက်ဆုံးရက်လည်းဖြစ်နိုင်သလို၊ ငွေကြေးဖြတ်တောက်ခံရခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ကျွမ်းကျင်သော ပြဿနာဖြေရှင်းသူများဖြစ်ရမည်။ စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုကို အကဲဖြတ်နိုင်စွမ်း၊ ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်း ပုံဖော်နိုင်စွမ်းနှင့်ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာ တွေးခေါ်နိုင်စွမ်းတို့သည် အဖွဲ့စည်းတစ်ခုကို ဦးဆောင်နေသူအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။
တစ်နေ့တာကာလအတွင်း၊ မန်နေဂျာများသည် ၎င်းတို့၏အဖွဲ့ သို့မဟုတ် ၎င်းတို့ကြီးကြပ်နေသည့် project အပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသော ဆုံးဖြတ်ချက်များစွာကို ပြုလုပ်ရန် တာဝန်ရှိပါသည်။
မည်သည့်အလုပ်ကို ဦးစားပေးသင့်ခြင်း၊ အရင်းအမြစ်များခွဲဝေခြင်း၊ တာဝန်များလွှဲအပ်ခြင်းတို့သည် managerတစ်ယောက်၏အရေးကြီးသောဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
တစ်ခါတစ်ရံ မန်နေဂျာတစ်ဦးသည် ပြဿနာတစ်ခုကို ဖြေရှင်းရန် ကိုယ်တိုင် ခိုင်လုံသော ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်လိုအပ်ပါသည်။
ပုံမှန်အချိန်များ တွင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် အများဆန္ဒနှင့်အညီဆုံးဖြတ်ရသည့်အခါ အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဆွေးနွေးမှုတို့သည် လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် များစွာ လမ်းညွှန်ကူညီပေးပါလိမ့်မည်။
အဆုံးစွန်အားဖြင့် မန်နေဂျာသည် ဆုံးဖြတ်ချက်၏ ရလဒ်အတွက် တာဝန်ရှိပြီး ရလဒ်များကို သက်တောင့်သက်သာလက်ခံနိုင်ရမည်။